May 2013 - iftineducation.com
Ethiopia oo Leexinaysa Biyaha Wabiga Nile iyo Arintaanoo Soo Cusboonaatay.
aadan21 / May 31, 2013
iftineducation.com – Ethiopia ayaa bilawday dhismaha biya-xireen cusub oo ay ka samaynayo wabiga ugu wayn Africa ee Niilka. Hawlaha dhismaha Biya-xireenkan ayaa leh wajiyo kala duwan, waxaana shalay oo Talaado ahayd ay dawladda Ethiopia shaaca ka qaadday in ay bilawday in ay Leexiso biyaha wabiga inta ay socoto hawsha dhismuhu. Madaxa wakaaladda Korontada ee Ethiopia Mihret Debebe ayaa sheegay in ay…
TOP NEWS : Dowlada oo hub badan, ka dajisay Kismaayo iyo Dareenka Axmed Madoobe
iftineducation.com – Warar hoose oo ay hesshay warbaahintu ayaa waxaa ay xaqiijinayaan in malinkii labaad Markab ay aaranyihiin Saanado Militari iyo hub uu ku xiranyahay Dekadda Magaalada Kismaayo. Sida aynu ka soo xiganay Diblumaasi sare oo magaciisa ku soo koobay Ambassador xashara, markabka Hubka ee Ku xiran Dekadda kismaayo ayaa waxaa uu ka yimid dalka Eritrea. Hubka ayaa waxaa uu ku…
Somaliland oo kusoo dhacday Bohoshii ay u qoday Dowladda Somalia (Waa maxay bohosha).
iftineducation.com – iyadoo ay Maamulka Somaliland Shaacisay inay ka go’day Somalia inteeda kale, ayaa waxaa mar qura Bohoshii Dowladda Somalia u qoday Siyaasiyiinta Somaliland kusoo dhex dhacay. Waxaa la Ogaaday in Dr. Maxamed C/laahi Cumar oo ah Wasiirka Arrimaha Dibadda Maamulka Somaliland uu Shirka lagu maalgalinaayay Somalia ee ka dhacay Magaallada Nairobe ee Dalka Kenya uga qeybgalay isaga oo matalaaya in…
Daawo Ikraan Caraale Iyo Hees Aad U Macaan Oo Ay U Qaadayso Gacaliyaheeda
iftineducation.com – Daawo Ikraan Caraale Iyo Hees Aad U Macaan Oo Ay U Qaadayso Gacaliyaheeda. Waxaan halkaan idin kugu soo gudbinaynaa hees cusub oo cododkeeda halaasiga inoogu soo gudbinayso fanaanada Ikraan Caraale. Heestaan ayaa waxay u qaaday amooraheeda Saxardiid. Halkaan Ka Daawo Muuqaalka W/Q : Najma Qaali Fadlan Like Iyo Share si aad asXaabtada inTa internetka iStiCmaAsho ugu gudbiso Thanks ____________________________________ …
Qofkii Tiisu Gasho Kaliya Ayaa Dhimanaya, Daawo Ninkaan Balaayadu Ku Habsatay Iyo Siduu Weli U Noolyahay
iftineducation.com – Waxaan halkaan idin kugu soo gudbinaynaa muuqaal cajiib ah oo aan hubno inaad la yaabi doontaan markaad daawataan. Muuqaalkaan ayaa waxa uu ku saabsanayahay nin masiibo ku habsatay oo weli nool taasoo markay dad badani arkeen muuqaalkaan amakaag ku noqotay. Ninkaan ayaa isagoo gaari nooca xaajiyada loo yaqaan wata oo maraya wado highway ah oo aad mashquul badan ayaa…
Daawo Video Soo dhaweyntii Cumar Sholi South Africa
iftineducation.com – Daawo Video Soo dhaweyntii Cumar Sholi South Africa. Madaalihii Hobollada Waaberi Cumar Shooli oo safar gaaban ku yimid Gudaha Magaalada Cape town ayaa si aad ah loogu soo dhaweeyey Garoonta Caalamiga ah ee Cape town International Airport. Fanaanka Cumar Shooli oo kamid ah fanaaniintii Hore waliba si aad ah ay Soomaalidu u taqaan ayaa la rajeenynaa in dhawaan…
Taliyaha ciidamada Kenya “3 boqol kun kiilo mitir ayaan Soomaaliya ka heysanaa”
iftineducation.com – Taliyaha guud ee ciidamadda Xoogga ee dalka Kenya Jeneraal Jullias Karangi ayaa markii ugu horeysey ka hadlay doorkii ciidamada Kenya ay ku lahaayeen doorashada Axmed Madoobe iyo qalalaasaha ka dhashay Jubbaland. Isaga oo ka hadlayay xaflad ay ku qalin jabinayeen saraakiil ciidan oo ka kala socdey dalalka Botswana, Masar, Nigeria, South Africa, Uganda iyo Tanzania taasi oo ka dhacday…
Nin Soomaali ah oo dhagax lagu diley Koonfur Afrika
aadan21 / May 30, 2013
iftineducation.com – Ugu yaraan qof Soomaali ah ayaa dhagax lagu diley, mid kalana waa la dhaawacay, iyada oo la boobay hanti aad u badan oo ay Soomaalida ku leedahay dalka Koonfur Afrika. Dhacdadan ugu dambeysey waxa ay ka dhacday magaalada Port Elisaberth ee dalkaasi, waxaana lagu soo waramayaa in ugu yaraan la boobay 15 dukaan oo ay Soomaalida leedahay. Waxa ay…
Wasaaradda waxbarashada oo ka fiirsanaysa manhaj mideysan oo ay soo saareen kun iskuul
iftineducation.com – Wasaaradda adeegga bulshada, qeybteeda waxbarashada iyo barbaarinta ayaa ka fiirsanaysa sidii ay ka yeeli lahayd manhaj mideysan oo ay si wadajir ah usoo gudbiyeen dalladaha waxbarashada Soomaaliya ka jira. Dalladahan ayaa waxa ay matalaan 1,130 (Kun boqol iyo sodon iskuul) oo gaar loo leeyahay, waxayna kala yihiin FPENS, SOFE, SOFEN, SOFEL, SAFE, FENPS iyo SEDA. Xaflad ay ku qabteen…
Wariye hubeysan oo is difaacay, iyo raggii weeraray oo midkood la qabtay
iftineducation.com – Wararka ka imanaya Kismaayo waxa ay sheegayaan in mid ka mid ah kooxihii xalay dhaawacay Wariye Cabdiqaadir Jiijiile gacanta lagu dhigey. Dhowr nin oo hubeysan ayaa soo weerartay wariyaha xili fiidkii ah oo uu ka baxay shaqada Radio Kismayo, waxayna ku weerareen gurigiisa oo ku yaala xaafadda Farjano. Balse wariyaha oo bastoolad ku hubeysnaa ayay u suurogashay in uu…